ananda (အနန္တ) မှ ချာလီချက်ပလင်၏ ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သော “The Gold Rush” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို MEMORY! Film Festival တွင် တင်ဆက်ပြသ | ananda
Home / သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ / ananda (အနန္တ) မှ ချာလီချက်ပလင်၏ ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သော “The Gold Rush” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို MEMORY! Film Festival တွင် တင်ဆက်ပြသ
ရန်ကုန် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ။ ။ ၆ နှစ်ပြည့်၊ ၅ ကြိမ်မြောက်ကျင်းပသည့် MEMORY! International Film Heritage Festival တွင် ချာလီချက်ပလင်၏ ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်သော The Gold Rush ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ananda (အနန္တ) မှ တင်ဆက်ပြသသွားမည်ဖြစ်သဖြင့် နွေးထွေးသော၊ ပျော်ရွှင်မြူးတူးဖွယ်ကောင်းသော ညနေခင်းအချိန်ကာ လလေးမှ ရုပ်ရှင်ချစ်သူပရိသတ်များကို စောင့်ကြိုလျက်ရှိသည်။ ပရိသတ်အများအပြား၏ သဘောကျနှစ်ခြိုက်စွာ ကြိုက်နှစ်သက်အားပေးခြင်းကို ခံရသော အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံတွင် နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၌ ပြသပေးသွားမည်ဖြစ်ကာ အဆိုပါရုပ်ရှင်ပွဲတော်သည် under the stars with movie stars ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်း ဖြစ်သည်။
MEMORY ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံ၏ လဟာပြင်၌ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်မှ ၁၂ ထိ အခမဲ့ပြသပေးသွားမည့် အပြင် ရုပ်ရှင်မပြသမီနှင့် ပြသနေစဉ် ananda (အနန္တ) ၏ infinity hub တွင် ရုပ်ရှင်နှင့် သက်ဆိုင်သော ဂိမ်းအစီ အစဉ်များနှင့် အလန်းစား 4G+ ဒေတာကို စမ်းသပ်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးများကို ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်များအတွက် ဖန်တီးပေးထားပါသည်။
ချာလီချက်ပလင်၏ အကောင်းဆုံးလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သော The Gold Rush ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည် ၁၉၂၅ ခုနှစ် တွင် အောင်မြင်မှုအများအပြားကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည့် ဟာသရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွင် ချက်ပလင်ကို Little Tramp အနေဖြင့် တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထူးခြားလှပသည့် ကကွက်များကိုလည်း ရှုမြင်ခံစားကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
“ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေဟာ ချာလီချက်ပလင်ရုပ်ရှင်ကားတွေကြည့်လိုက်ရင် နှစ်သက် သဘောကျပြီး ထပ်ခါထပ်ခါကြည့်ချင်ကြလိမ့်မယ်လု့ိ ကျွန်မပြောရဲပါတယ်။ Gold Rush ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ လူတိုင်း ကြည့်ဖူးသင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ ananda (အနန္တ) ရုပ်ရှင်ညလေးကို ဝမ်းသာ ကြည်နူးစွာနဲ့ ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု ananda (အနန္တ) ၏ Branding and Communications ခေါင်းဆောင် မဆုမြတ်နိုးမှ ဆိုသည်။
MEMORY ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း ၆၀ ကို ၁၀ ရက်ကြာပြသပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ယခုရုပ်ရှင် ပွဲတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြသသော ခမ်းနားကြီးကျယ်သည့် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ကာ အာရှတွင်လည်း ထူးခြားသည့်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ဂန္ထဝင်ဇာတ်ကားများနှင့် ခေတ်ပေါ်ဇာတ်ကား များကို ယှဉ်တွဲပြသပေးသွားမည်ဖြစ်သဖြင့် ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်များသည် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၏ ခေတ်အခြေအနေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ananda (အနန္တ) သည် ၁ ဂစ်ဂါဘိုက်ကို ၆၇၀ ကျပ်၊ ၇ Mbps အထိ မြန်သော အမြန်နှုန်းများနှင့် ဈေးကွက်ထဲတွင် အကောင်းဆုံး၊ အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးစွမ်းလျက်ရှိသည်။ ရန်ကုန်တွင် မေလ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၌ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော ananda (အနန္တ) သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့၌ ၎င်း၏ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်မိတ်ဆက် ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://www.facebook.com/anandalivemore/ သို့ ဝင်ရောက်ကြည့် ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
Amara Communications Co., Ltd. (ACS) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် telecommunications ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် ဦးဆောင်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ananda (အနန္တ) ကို ACS မှ ပိုင်ဆိုင်ကာ လုပ်ငန်းကို လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ananda (အနန္တ) သည် တစ်ဦးချင်း၊ လုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့လိုက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျယ်ပြန့်သောအတွေ့အကြုံများကို ခံစားရ ရှိစေနိုင်မည့် 4G+ ဒေတာ အော်ပရေတာ (4G+ data-only operator) အဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒုတိယ သုံးလပတ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဝန်ဆောင်မှုများ စတင်ပေးခဲ့ပြီး ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့တွင် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင်ရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ananda (အနန္တ) သည် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်သည့် မြန်မာ့ဒစ်ဂျစ်တယ် လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံ၏ အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော telecommunications ဈေးကွက်ကို ခြေလှမ်းအစပြုနိုင်ရန် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့သော ACS အနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း၊ တာဝါတိုင်၊ စွမ်းအင်၊ ရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစသည့် မိုဘိုင်းနည်းပညာဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ACS သည် ငွေဖြည့်ကတ် (top-up cards) များကို ဈေးကွက်အတွင်း ဖြန့်ချိသည့်လုပ်ငန်းကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ ACS သည် လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ခရီးသွား ဝန်ဆောင်မှု၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တို့တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းစုတစ်ခုဖြစ်သော IGE လုပ်ငန်းစု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များပိုမိုသိရှိလိုပါက www.ananda.com.mm သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာ နိုင်ပါသည်။